အာဏာမဲ့တဲ့လူကို အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်သလို ဖြစ်နေတယ် – Nyang Media
အာဏာမဲ့တဲ့လူကို အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ်သလို ဖြစ်နေတယ်
ဒီဇင်ဘာ 02, 2019
KNDP / ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ (ဦး) မန်းအောင်ပြည်စိုး
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အယ်ဖောင်းရှိုက ကယားအမျိုးသား မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ ကယားအမျိုးသား တစ်ယောက်က ကယားအမျိုးသားလူငယ်တွေ ထောင်ကလွတ်မှာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုလူဟာ ဘယ်လိုလူလဲ …
ကရင်တိုင်းရင်းသားပါတီ (၄) ခု စုပေါင်းကာ ဖွဲ့စည်းထားသော ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ (ဦး) မန်းအောင်ပြည်စိုးကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) ရဲ့ သမိုင်းကို အကျဉ်းလောက်ပြောပြပေးပါ။
MAPS – ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားကိုအခြေခံတဲ့ လေးပါတီကနေပြီးတော့ ပေါင်းစည်းလိုက်တယ်။ ပေါင်းစည်း လိုက်ပြီးတော့ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ (၂၂ . ၂ . ၂၀၁၈) နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ရွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်၊ အခုဆို ငါးမြို့နယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ပါတီရုံးတွေ ဖွင့်ပြီးဆိုင်းဘုတ်တင်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေက ပါတီဝင်တွေ၊ ကော်မတီဝင်တွေကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးပြီး လုပ်တယ်ပေါ့။ အဆင့်ဆင့်ရွေးချယ် တာဝန်ပေးမှုတွေလည်း လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ မြို့နယ်တွေကိုဆင်းပြီး စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်ကိုင်နေတယ်။ ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေး နှစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးပြီ။ မနေ့ကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ဖို့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလာက်ပြောရင် ရမှာပေါ့။
‘နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ် ချင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ခင်ဗျားတို့ကြေညာ၊ ကျနော်မပါဘူး’ လို့ကိုပြောခဲ့တာ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) အနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
MAPS – ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင် တဲ့နေရာတိုင်း နိုင်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ ကျနော်တို့ အနေအထားအမျိုးမျိုးကြောင့် အကယ်၍ လေးပုံသုံးပုံလောက် နိုင်မယ်ဆိုလည်း ကျေနပ်ပါတယ်။ ကြိုးတော့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ ယတိပြတ်ကြီးတော့ ပြောလို့မရသေးဘူးလေဗျာ။ NLD ရဲ့အရှိန်အဝါကလည်း ကျန်သေးတယ်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကလည်း လှုပ်ရှားနေတယ်၊ နောက် ကျနော်တို့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဖလုံ – စဝေါ်ပါတီကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ အဲဒီ အနေအထား မျိုးလေး တွေ ရှိတဲ့အတွက် ရာနှုန်းပြည့် Hundred Percent ကတော့ ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ မျှော်တော့ မျှော်လင့်ထားတာ ပေါ့ဗျာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် နိုင်ငံရဲ့ တတိယမြောက်သမ္မတဟာ ကရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ သလို၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြီးရင် ပထမဆုံးစစ်ဦးချုပ်ဟာ ကရင်တိုင်းရင်းသားပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာသိမ်းပြီး တစ်ပါတီစနစ်နဲ့ သွားခဲ့ချိန်ကစပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသား အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား တွေ ကို အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ အမြင့်ဆုံးရာထူးတွေ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးမှု မရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။
MAPS – အဲဒါ ကျနော်အင်မတန်ဖြေချင်တဲ့ မေးခွန်းပဲ။ သမ္မတကြီးက မန်းဝင်းမောင်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဗိုလ်ချုပ် စောစမစ်ဒွန်း ပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ဗိုလ်နေဝင်းက ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်းကို ဖြုတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်နေဝင်းကနေ အခု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အထိ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မဖြစ်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား တွေက အမြင့်ဆုံး ကျနော် သိရသလောက် ဗိုလ်မှူးချုပ်လောက်ပဲဗျ။ ဗိုလ်ကြီးတို့ ဗိုလ်မှူးတို့အဆင့်လောက် ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဌာနပြောင်းတာတို့၊ ဖယ်ရှားလိုက်တာ တို့၊ ဖြုတ်လိုက်တာတို့ ဒါတွေပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကျနော် တို့ ညီညွှတ်ရေး၊ မျှတရေး၊ တန်းတူရေး ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့က မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ခံစားနိုင်မလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက အရည်အချင်းမရှိလို့လား။ အရည်အချင်းမရှိအောင် ဖန်တီးနေလို့လား။ ကရင်တောင်မှ စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ နောက်ပိုင်းဘာလို့ မဖြစ်တာလဲ။ ဆိုတော့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ နှိပ်ကွပ်တာတွေ၊ နှိမ်တာတွေရှိနေတယ်။
NLD ကို ကျနော်တို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း နည်းနည်းလေးတော့ အထင်သေး လာပြီပေါ့ဗျာ။ အထင်သေးလာတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမလဲဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး …
အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကတော့ အဲဒါကို လုံးဝမကြိုက်ဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ မကျေနပ်ဘူးလို့ ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ အခု ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေအရက ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲက ဘယ်လိုမှ သမ္မတမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတော့ဘူး။ အခု ကတော့ ၂၀၁၀ တုန်းကတော့ (ဦး) စိုင်းမောက်ခမ်း၊ အခု ၂၀၁၅ မှာက (ဦး) ဟင်နရီဗန်ထီးယူ။ အဲဒါတွေက အနိုင်ရပါတီတွေက တင်ပေး လို့သာ၊ မသထာရေစာ ပေးလိုက်လို့သာရတာ။ အကယ်၍ မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကျနော် တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရမှာ မဟုတ် ဘူး။ ဘာလို့လဲဆို တိုင်းရင်းသားတွေက လွှတ်တော်မှာ မဲအများစု ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ မနိုင်နိုင်ဘူး။ မနိုင်နိုင်သည့် အတွက် သူများပေးမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ခံစားနိုင်မလဲ။ ခင်ဗျားတို့လည်း စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေကို ဥပဒေအရတားမြစ်ထားပေမယ့် ဒါတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဌတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
MAPS – ကျနော် သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတို့ အပြန်အလှန်ပြောထားကြတဲ့ အချက် ကလေး ကို တွေ့တယ်။ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့အတွက် ဖဆပလညီလာခံမှာ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာ အဖြစ် ပြဌာန်းဖို့အဆိုတင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ညီညွှတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်လုပ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့အကြောင်း ခါးခါးသီးသီး ငြင်းခဲ့ တာရှိတယ်။ ဘယ်လိုငြင်းလဲဆိုရင် ‘နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ် ချင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ခင်ဗျားတို့ကြေညာ၊ ကျနော်မပါဘူး’ လို့ကိုပြောခဲ့တာ။ ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဦးနုတို့က သိတဲ့အတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်တယ်။ အဲဒီလိုသတ်မှတ်ရာကနေ ကချင်တို့၊ ချင်းတို့ တော်လှန်ရေး စတယ် ပေါ့။
တရားဥပဒေကို ဖားတာလား၊ နှိပ်ကွပ်တာလား၊ သူ့ကိုစော်ကားတာ၊ မလေးမစားလုပ်တာများလို့ ဒီလိုတောင်းဆိုတာလား ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။ ကယားပြည်နယ်အစိုးရက ဒီကလေးတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ် နည်းတယ်ဆိုပြီး ထပ်တောင်းဆိုထားတာဆိုတော့ …
တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် သူပုန်ထတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ အခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းထား တာ ကို ဦးနုက နောက်ပိုင်း ဖယ်ရှားလိုက်ရတယ်။ သို့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ၁၉၇၄ ဥပဒေမှာရော၊ အခု ၂၀၀၈ ဥပဒေမှာပါ ဘယ်လို ရေးထားသလဲဆိုတော့ ‘နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားအများဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့် ပြည့်စုံသည့် ဘာသာသာသနာ ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်’ လို့ ရေးထားတယ်။ ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေကိုတော့ ‘နိုင်ငံတော် သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ် သောဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်’ လို့ရေးထားတယ်။ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆၁ နဲ့ ၃၆၂ မှာ အဲဒီအတိုင်း ရေးထားတာ။ အဲဒီ တော့ တစ်ခုက ဂုဏ်ထူးဝိသေနဲ့ပြည့်စုံတယ်၊ ဟိုဘက်ကတော့ ရှိနေတဲ့ဘာသာတွေဆိုတော့ ဟိုဘာသာတွေက ဂုဏ်ထူး ဝိသေသနဲ့ မပြည့်စုံသလိုလို ဘာလိုလိုသွားဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို တိုင်းရင်းသားတွေက ဘာမှမလုပ်သာလို့သာနေတာ၊ စိတ်ထဲ မှာတော့ မခံစား နိုင်ဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ အပိုင်းမျိုးလေးတွေ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ အိန္ဒိယ မှာဆိုရင် ဟိန္ဒူ ဘာသာကို ဂုဏ်ထူးဝိသေသနဲ့ ပြည့်စုံတယ်ရေးပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုရုံရေးရင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် တွေ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ။ အဲဒီလိုပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေ မခံစားနိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကချင်နဲ့ ချင်းဆို အများစုက ခရစ်ယာန်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကရင်မှာလည်း ခရစ်ယာန်တွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ ပြဿနာရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆိုရင် လေးလေးနက်နက် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကိုင်တွယ်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ဒီလိုပဲမြင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကရင်နီလူငယ်ခြောက်ယောက်ကို ပြစ်ဒဏ်ထပ်တိုးဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရကဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုက ဥက္ကဌတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
MAPS – ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အယ်ဖောင်းရှိုက ကယားအမျိုးသား မဟုတ်ဘူးလားဗျ။ ကယားအမျိုးသား တစ်ယောက်က ကယား အမျိုးသားလူငယ်တွေ ထောင်ကလွတ်မှာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုလူဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ်။ ဒီကိစ္စက တရားဥပဒေကို ဖားတာလား၊ နှိပ်ကွပ်တာလား၊ သူ့ကိုစော်ကားတာ၊ မလေးမစားလုပ်တာများလို့ ဒီလိုတောင်းဆိုတာလား ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။ ကယားပြည်နယ်အစိုးရက ဒီကလေးတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ် နည်းတယ်ဆိုပြီး ထပ်တောင်းဆိုထားတာဆိုတော့ ကျနော်ကြားရတာတောင် တုန်တုန်လှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေရတယ်။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းက ဖြစ်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အာဏာ ရထားတဲ့လူက အာဏာမဲ့တဲ့လူကို အတင်းအဓမ္မနှိပ်ကွပ် သလို ဖြစ်နေတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – KNDP ပါတီအနေနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ထဲက မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ဝင်ပြိုင်မှာလား။ ပြည်မမှာရော ဝင်ပြိုင်ဖို့ ရှိပါသလား။
MAPS – ကရင်ပြည်နယ်မှာ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်ရှိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ ငါးမြို့နယ်ကိုတော့ အုပ်စီးထားပြီးပြီ။ နှစ်မြို့နယ်ကိုတော့ ဆက်ပြီးကြိုးစားနေတုန်းပဲ။ ပြည်မမှာကတော့ ကျနော်လူတွေ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စလောက်တော့ ဝင်ပြိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ နည်းနည်းနီးလာမှပဲ သေသေချာချာ ပြောလို့ရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာပေါ့ဗျာ။ အခြားကတော့ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ပြည်မမှာဆိုရင်လည်း ကရင်ပါတီ နှစ်ခုရှိတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ နောက် တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာတော့ ကျနော်တို့ဝင်ပြီးတော့ မပြိုင်တော့ဘူး၊ သူတို့လည်း ကျနော်တို့ဆီမှာ လာပြီးတော့ မပြိုင်တော့ဘူးပေါ့၊ အဲဒီလိုဖြစ်အောင်ပေါ့။ မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုမှာ ကရင်ပါတီတစ်ခုက တစ်ယောက်တည်းပဲ ဝင်ပြိုင်တာ မျိုးဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ဖန်တီးကြိုးစားနေတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကရင်ပြည်နယ်မှာ လာပြိုင်ကြမယ့် ပြည်မက အင်အားကြီးပါတီတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုရင် KNDP အနေနဲ့ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးတွေရှိလဲ။
MAPS – ကျနော်တို့က ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးပဲရှိရှိ ပြိုင်မှာပဲ။ နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ကျနော်တို့က ပြိုင်မှာပဲ။ အခု လတ်တလောမှာတော့ ပါတီအချင်းချင်းအနေနဲ့ ညှိတာ နှိုင်းတာတော့ မရှိဘူး။ ညှိဖို့ နှိုင်းဖို့လည်း မရှိဘူးလေ။ ကျနော်တို့ရဲ့ Policy ကိုက ကိုယ်နဲ့ အခြေခံမူဝါဒချင်းတူတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ပဲ မဟာမိတ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ ပါတီကြီးတွေနဲ့ကတော့ မရှိဘူး။ မရှိတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ကျနော်တို့ ပြိုင်မှာပဲ။ ကိုယ်အင်အားရှိသလောက်၊ တတ်နိုင် သလောက် ပေါ့။ အဲဒီလိုပဲ ကျနော်ပြောချင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိ NLD အစိုးရအပေါ် ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမြင်က ယေဘုယျအားဖြင့် ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
MAPS – အင်း Impression တော့ တော်တော်လေးကို Down နေကြပါပြီ၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာက။ ကျန်တဲ့ဒေသမှာလည်း . . . ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆို ကတိကဝတ်တွေက မတည်ဘူး။ အခု ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလည်း ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ပင်လုံက ခုထက်ထိ (၃) ကြိမ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် လုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ အခုဆို တစ်နှစ်ကျော်ပြီ တစ်ကြိမ်မှမလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်း မတည်ဘူး။
တိုင်းရင်းသား တွေဘက်က အသလွတ်ကြီး တစ်ဖက် စောင်းနင်း ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်း မျှမျှတတ ညီအစ်ကိုမောင်နှမခြင်း သဘောထားမျိုးနဲ့ဆို၊ ခုနက …
တိုင်းရင်းသား ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာလည်း မဖြစ်လာဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေပြင်မယ် ဆိုတဲ့ဟာလည်း မဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ မမှန်ကန်တဲ့၊ မတည်တဲ့ကတိအပေါ်မှာ NLD ကို ကျနော်တို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း နည်းနည်းလေးတော့ အထင်သေး လာပြီပေါ့ဗျာ။ အထင်သေးလာတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမလဲဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ဘာလို့လည်းဆို ကျနော်တို့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေက ရိုးတယ်၊ သူများတွေနည်းနည်းပါးပါး ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ လုပ်ရင်လည်း ပေးချင်လည်း ပေးလိုက် မှာပဲ။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့က အမှန်တရားကိုရှင်းပြပြီးတော့၊ လိုက်လံစည်းရုံးပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ NLD အပေါ်မှာကတော့ နည်းနည်းလေး လျော့လျော့ရဲရဲ ဖြစ်လာပြီလို့ ကျတော်မြင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ တကယ်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းတွေက ဘာတွေဖြစ် တယ်ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူတွေနားလည်အောင် အရိုးရှင်းဆုံး ပြောပြနိုင်မလား။
MAPS – ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်သော၊ ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် ပြဌာန်းနိုင်ခွင့်ရှိသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု၊ တန်းတူသော၊ လွတ်လပ်သော၊ ညီမျှသော၊ မျှတသော အနေအထားမျိုး။ ကိုယ့်အခြေခံဥပဒေ ကိုယ်ပဲဆွဲမယ် ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ပဲ ဖန်တီးနိုင်မယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီးပြောခဲ့သလိုပေါ့။ နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာ မိမိဘာသာမိမိဖန်တီးမယ် ဆိုတာ။ Political Destiny ပေါ့။ “We shall decide our own Political destiny.” အဲဒါပဲ ကျနော်တို့က လိုချင်တယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ပါတီကြီးတစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ လူမျိုးကြီးတစ်ခခုကဖြစ်စေ ချုပ်ချယ်တယ် လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ ကျနော်တို့က မလိုချင်ဘူးဗျာ။ အဲဒါပဲ။
ငြမ်းမီဒီယာ – တခြား ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်း ပြောပေးပါ။
MAPS – ခုနကပြောသလိုပေါ့ဗျာ။ အင်အားအများဆုံး လူဦးရေလည်းအများဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ဗမာတွေဟာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေ ပါပဲလို့။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခံယူသလို ကျနော်တို့လည်း ဒီလိုပဲနားလည်တယ်။ သို့သော် တချို့ကတော့ ဒီလိုမခံယူဘူးဗျ၊ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မဟာလူမျိုးကြီး၊ ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေပဲ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ တန်းတူညီမျှမှုဆိုတာကို သူတို့က သိပ်မပေးချင် ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ အားလုံးအတူတကွ ရှင်သန်ပေါက်ဖွား မွေးဖွားလာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာ တန်းတူညီမျှမှု မရှိဘူးဆိုရင် ဒီလို Crash ဖြစ်တာတွေကတော့ ဆက်ပြီးတော့သွားနေဦးမှာပဲ။ အခု အကယ်၍ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးပွဲက အထမမြောက်ဘူး၊ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ တွေးလို့ရပါတယ်။ အခုထက်ထိ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေက NCA ကိုမထိုးသေးဘူး။ ဆိုတော့ အင်အားအများဆုံး၊ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေက ဒါကို သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါ တိုင်းရင်းသား တွေဘက်က အသလွတ်ကြီး တစ်ဖက် စောင်းနင်း ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်း မျှမျှတတ ညီအစ်ကိုမောင်နှမခြင်း သဘောထားမျိုးနဲ့ဆို၊ ခုနက မမျှတာလေး တွေပေါ့လေ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တို့၊ သမ္မတတို့ ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေက ဗမာမဟုတ်တဲ့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် ဘယ် တော့မှ ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အပိုင်းမျိုးတွေ မရှိစေချင်ဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တည့်တည့်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
Tags: KNDP, NLD, ကရင်, တိုင်းရင်းသား
အခြေခံဥပဒေပြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ် (၁၀) နှစ်နဲ့ ပြင်နိုင်ရင် ကံကောင်း – အပိုင်း(၂)
ရခိုင်ပါတီကအများစုနိုင်ပြီး NLD က ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ . . . . အပိုင်း (၃)